Isixhobo se-Toolz O. Ukulindela ukuba umntwana abe nenombolo yesibini - amaNigeria, ama-Afrika kunye neMbali yeHlabathi
I-Rave News Digest: I-Toolz kunye ne-Tunde Demuren elindele ukuba umntwana abe liNombolo yesiBini, uJoe Biden wenza isithembiso seebhiliyoni zokuLingana ngobuhlanga, iSanchez + nangakumbi
Julayi 29, 2020
Toolz Oniru-Demuren ukhulelwe umntwana yenombolo yesibini, uJoe Biden uthembisa amawaka ezigidi ukuphucula ukulingana ngokobuhlanga, i-Inter Milan ifuna ukusayina u-Alexis Sanchez. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. I-Toolz & Tunde Demuren elindele ukuba umntwana abeenombolo ezimbini
Kwaye enye enye! 👶🏽 #AlwaysSiyabulela ku: @symplysimi ngo #Duduke - ingoma entle kangaka !!!
Iposi elibiwe TOOLZ (@toolzo) kwi Julayi 29, 2020 kwi-1: 53am PDT
Umsasazi womboniso owaziwayo kunye nentombazana yonomathotholo I-Toolz Oniru Demuren kunye nomphathi wendoda yakhe Tunde Demuren banenombolo yesibini yomntwana, njengoko kubhengezwe ubuntu beendaba. I-Toolz kunye ne-Tunde Demuren eyatshata iminyaka emine ibuyile kwaye yamkela unyana ngo-2018, iyokwamkela umntwana iinombolo ezimbini ngalo naluphi na usuku ukusukela ngoku.
Unxibe impahla emnyama emdaka ne-mustard enemibala njengoko wayebonisa istudy sakhe esikhulu, iTool yayibamba eposini "Kwaye enye enye!"
#Iendlela zethu ziyabulela.
Sivuyisana ngentloko kwesi sibini.
2. Inkundla ePhakamileyo yaseGhana yaqhankqalaza isicelo sokunqanda uJohnson Akuamoah Asiedu ukuba asebenze njengoMphicothi zincwadi Jikelele
Igqwetha-jikelele. UDaniel Yaw Domelevo (ngasekhohlo), uMphicothi-zincwadi Jikelele enengxoxo noMnumzana Godfred Yeboah Dame, uSekela-Gqwetha-Jikelele
Inkundla ePhakamileyo yaseGhana yafaka isicelo sokurhoxisa UJohnson Akuamoah Asiedu ekusebenzeni njengoMphicothi zincwadi Jikelele. Oku kwakungemva kokuba inkundla yamkele uSekela-Gqwetha Jikelele NguGodfred Yeboah Dame isicelo sokuba noMnu Asiedu noMphicothi zincwadi Jikelele UDaniel Domelovo Ubethwe njengabamangalelwa ecaleni. Lo ngulowo ugcwaliswe ngummelwane we-CDD kuMthetho woLuntu kunye nezoBulungisa, uProf. UStephen Asare.
I-Ofisi kaMongameli nge-4 kaJulayi yandisa ixesha lekhefu loMphicothi-zincwadi-Jikelele, uDaniel Domelevo ukusuka kwiintsuku ezili-123 ukuya kowe-167 ukusebenza nge-1 kaJulayi 2020. Oku kuza emva kwenkxalabo ephakanyiswe nguMnumzana Domelovo malunga nomyalelo wokuba athathe ingxelo ahambe kuba umsebenzi wakhe, ngokutsho kuye, ehlazisa urhulumente.
3. UMzantsi Afrika: Amaphepha e-DA afaka amaphepha kwinkundla entsha ukunqanda ukuvalwa kwezikolo
I-Democratic Alliance (DA) ifake amaphepha enkundla ngolwesiThathu umhla wama-29 kweyeKhala kwisigqibo sokurhoxisa isibhengezo esenziwe nguMongameli UCyril Ramaphosa Izikolo zikarhulumente ziya kunyanzelwa ukuba zithathe ikhefu leeveki ezine ngokungahambisani nomthetho, ezingekho mthethweni, kwaye zingabophisi.
Umbutho ubusoloko usilwa nawo nawuphi na umzamo wokuzama ukuvulwa kwezikolo ngamanqanaba aphezulu okuvalwa kwesizwe, ebize uRamaphosa kuphela kwizikolo ezingavalwanga ukuvulwa kwemigaqo engqongqo ye-COVID-19.
Abaphathiswa bezithunzi ze-DA abafanelekileyo kwiZemfundo ePhakamileyo nesiSiseko, Belinda Bozzoli kwaye Nomsa Marchesi bathi ngolwesithathu bangenise incwadi ebhaliweyo nefungelweyo kwiNkundla ePhakamileyo yaseGauteng apho bezichaza khona izizathu zokuba bayakholelwa ukuba isibhengezo sikaRamaphosa asiyaleli ukuba izikolo mazingavalwa.
4. Unyulo lwase-US: I-Biden ithembisa amawaka ezigidi ukuphucula ukulingana ngokobuhlanga
Umongameli wentando yesininzi UJoe Biden Uthembise ukuchitha amashumi ezigidi zeedola ukunceda abantu bemibala ukuba boyise ukungalingani kwezoqoqosho ukuba uza kuphumelela unyulo ngo-Novemba. Kwintetho kwidolophu yakhe yaseWilmington, uBiden wathembisa ukuonyusa amathuba kumashishini amnyama, amaLatino kunye namaNative American.
Watyhola uMongameli uDonald Trump lokubetha amadangatye obuhlanga. Utyhola noTrump ngokusilela ukukhusela abantu kwi-coronavirus. I-Biden ibambe isikhokelo esicacileyo kumongameli kwi-kazwelonke. Uye wathi uzokhetha iqabane lakhe kwiveki yokuqala ka-Agasti. Sele athembise ukukhetha umntu oza kuba ngumongameli.
5. UAlexis Sanchez: U-Inter Milan ufuna ukusayina iManchester United iye phambili
U-Alexis Sanchez ukole amanqaku amane kwimidlalo engama-28 kuyo yonke imincintiswano ngexesha lokubolekwa kwemali mboleko kunye ne-Inter Milan
I-Inter Milan ifuna ukusayina iManchester United iye phambili Alexis Sanchez kwisivumelwano esisisigxina. Umdlali waseChile, oneminyaka engama-31, uye wachukumiseka ngexesha lokubolekwa kwemali ebolekiswe e-Italiya wafumana amanqaku akhe wesithathu kwimidlalo esibhozo ngexesha lokuphumelela kuka-3-0 eGenoa.
USanchez wayebandakanyeke kwakhona ngolwe-Lwesibini ebusuku njengoko i-Inter igcine i-push yabo ukugqiba okwesibini kwi-Serie A ngo-2-0 ngo-Napoli. I-Inter ayigqibanga kwisithathu esiphezulu seSerie A ukusukela ngo-2011.
Isivumelwano sokudlala somdlali we-United- ekucingelwa ukuba sikwi- $ 400,000 ngeveki - kungaphaya kokufika kwe-Inter kodwa umphathi we-Old Trafford Ole Gunnar Solskjaer akafuni ukugcina eyayisakuba yiBarcelona phambili kwisizini ezayo.
I-TOOLZ iqala umgca weLingerie yakhe kubafazi bePlagi yeTagz 'uSabella'
Uhlobo Rave Julayi 29, 2020
U-Yvonne Orji, abanye abagqatswa abaNtsundu kwii-2020 ze-Emmy zeeNketho